अरूको प्रगति देखेर ईश्या गर्नुभन्दा अरू कसरी अघि बढि रहेका छन् भनेर बुझौ
अक्टोबर 3, 2019 अक्टोबर 3, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment डा. राम बहादुर बोहरा, प्रगति
हामी अरूको प्रगति देखेर किन ईश्या गर्छौं र अरू जस्तो बन्न किन चाहन्नौ ? हामीमा समान बिचार किन आउन सकेन यो सोच्नुपर्ने भएको छ । जब-जब हामीले आफ्नो स्वार्थ पुर्ती गर्न थाल्छौं भने यस्ले लामो समए टिक्न सक्दैन । यस्को ठोस् कारण भनेकै कलियुग हो यहाँ धर्म र पाप तुरुन्त देखिन्छ ।
बाहिर यसो ध्यान दिन्छौं र हेर्छौ तर केवल अरूले कमाएको राम्रो लगाएको टलल्क टल्कने गाडी चडेको देख्छौं तर हामीले यो सोचेका हुदैनौ यो सवै कसरी सम्भव भयो होला ? यहाँ जसले मेहनत गर्छ जस्ले दिन रात भनेको हुदैन उस्ले पक्कै केहि गरेको हुनुपर्छ र हामीले पनि उ जस्तै गर्छौं भने पक्कै पनि केहि गर्न सक्छौ र उ जतिकै बन्न सक्छौं भन्ने भावना जाग्नुपर्ने हो तर यहाँ सवै उल्टो परिपाटीको जन्म भएको छ ।
यहाँ विकास गर्ने हो भने के छैन तर भएर पनि हामी पछि परेका छौं यसको ठोस् कारण हो मनोवलको कमि । आज देशमा विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारण भनेकै स्वार्थ हो । हामीमा स्वार्थ हावी छ । हामी केवल अरूलाई बनाउन होइन स्वं बन्नमा रातदिन एक गरिरहेका छौं ।
जुनदिन हामीले सवैभन्दा पहिले अरूको लागि सोच्ने छौं त्यतिबेला हजारौंको साथ हामीले प्राप्त गर्नेछौं । यसले सवैभन्दा ठूलो उपलब्धि हात पार्नेछ । तर वर्तमान अवस्थामा अरूको लागि भन्दा आफ्नाका लागि हामीले सोच्न थालेको घमण्डमा यसले नकरात्मक सन्देश जान थाल्ने देखिन्छ ।
आज नेपालमा सवै यहि नै भएको छ । सम्पत्ति ठूलो कुरा होइन राम्रो काम गरौं पैसा आफै आउन थाल्दछ । जब-जब हामीले आफ्नो लागि नभएर अरूको लागि काम गर्नेछौं त्यतिबेला सबैको साथ अवश्य प्राप्त हुनेछ । आज हामीले चाहेमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौं तर हामीलाई परिवर्तन होइन नाम कमाउनु छ अरूलाई नाम देखाउनुछ । आफै बन्नुछ अरूलाई किन बनाउने यदि बनायौं भने भोलीदेखि हामीलाई गन्न छोड्ने छैन भन्ने जस्ता गलत विचार हाम्रो मानस पटलमा अहिले जागेको छ ।
← के हो फोरजी (4G) ?
4G सेवा सञ्चालन भएका जिल्लाहरु र शहरहरु →
मार्च 15, 2019 मार्च 15, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
सेप्टेम्बर 10, 2019 सेप्टेम्बर 10, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
जुलाई 14, 2019 जुलाई 14, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
One thought on “अरूको प्रगति देखेर ईश्या गर्नुभन्दा आफू लागौ प्रगति गर्नेतर्फ”
Pingback:होशियार ! ख्याल गरौ पाप नगर मर्ने बेला सास नगएर तड्पनु पर्ला है